Google Analytics Spam - Semalt Expert Anoziva Nzira Yokuivhara
Google Analytics inobatwa nemhando dzakasiyana dze spam. Nyaya yakawanda inowanzobatwa neGoogle Analytics ndiyo kutumira spam. Iko spam inokanganisa maakaiti akasiyana siyana eGoogle asiwo inogona kuiswa pane dzimwe nhoroondo.
Frank Abagnale, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vekubudirira Semalt , anotarisa nzira dzekupwanya Google Analytics spam - chapter 7 in pa.
Mapiritsi anoshandiswa nokuda kwezvikonzero zvakawanda:
a) Kubhadhara Komisheni
Vashambadziri vemavara vanowanzowana mishoni inokonzerwa nokuwedzera kwemashamba emigwagwa anowanikwa nemapamu.
Vamwe vanonzi spam vakasika vanoshandisa ma spam kuti vaparidze mazano avo uye vashandise kuti vazivise kuitira kuti vauye kune vakawanda vanoona.
c) Kutengesa ma email
Iyi spam inoshandiswa kukanganisa maimari emaimeri ayo anotengeswa kune vamwe vashandisi.
d) Kuparadzira marware
Zvinyorwa zvinoratidzira zvinoreva zvirongwa zvinotyisa izvo zvinoshandiswa kuwana ruzivo rwakasununguka rwekushandisa dhidhiyo. Spam anoshandiswa kuparadzira zvirongwa izvi zvingave zviri muhutachiona kana Trojan.
e) Kuparadzira ruzivo rwakakanganiswa naVa CEO kuwedzera kutengesa
Pakave nezviitiko zveEECO izvo zvinoshandisa spam kuti zvive nehana yekunyengera kuti dzinopfurikidza nekuisa mashoko akadaro kune mamwe mawebsite evanhu.
Pane nzira dzakasiyana dzokuti kutumira mapurisa kunogona kudziviswa kunoti:
1) Kushandiswa kwemafaira .htacess
Iyi nzira inosanganisira kukopa mamwe mafaira mumakombiyuta anotarirwa, uye mafaira aya anorayira zvinogadzira kuti server inoshanda sei. Iyi nzira yekudzivirira spams ine zvisingakwanisi zvinosanganisira:
Bhoti dzinosarudza uye dzinodzivirira nzvimbo dzave dzakadzivirirwa nemafaira aya.
Izvo zvinotyisa kukuvhara mawebsite (URLs) nokuti inopedza nguva yakawanda.
Ma spamu anowanikwawo zuva rega rega, uye naizvozvo zvinova zvakaoma kuramba navo.
2) Kushandisa zvinyorwa zvinowanzoitwa
Tsanangudzo inogona kuiswa muchidimbu mumatanho anotevera:
Tora paGoogle Analytics pane kombiyuta yako uye sarudza All Traffic icon yakatevera neChirwere chekufambisa.
Nhanho inotevera ndeyokuita kuti iwe wakagadzirisa kutumira motokari nemaitiro akakodzera anokonzera. iyo nzvimbo inowanikwa inoshandiswa nema spam.
Pane zvibatanidzi zvinogona kushandiswa kugona kutsvaga mutsara kana pane zvakaoma pakuwana Rokupedzisira Referral List. Izvi zvinosanganisira:
Nhanho inotevera ichitsvaga paIndonesia icon uye kusarudza sarudzo dzinoshandiswa. Izvi zvinoteverwa nekusarudza kuwedzera kuwedzera mafaira. Iyi nzira inoteverwa nekusarudza zita remusero uye zvino kusarudza tsika yakasarudzika seye firiji. Izvi zvinoteverwa nekusarudza bhokisi risina kukonzera uye kusarudza 'mushandirapamwe' pane firimu. Nhanho yekupedzisira ndiyo kusarudza muenzaniso wechirongwa.
Kukanganiswa kwekushandisa nzira iyi yekudzivirira spam ware ndeyekuti zvinogona kuvhiringidza zvisingatarisirwi nedzimwe chete gumi dzinogona kuwedzerwa panguva yakatarwa.
3) Kushandiswa kwekutsvaga kutumira Nhamba
Imwe nzira yekudzivirira kuparadzaniswa inoshandisa mazita ekutsvaga. Inoshandiswa kune mumwe munhu uye kuzvidzora. Kushandiswa kweZvinyorwa Zvokuregererwa Kunogona kuitika mumatanho matatu.
Sarudza Mutemo weGoogle pane imwe nhamba yeGoogle Analytics uye sarudza Purasi yako. Izvi zvinotevera nekusarudza sarudzo yekutsvaga ruzivo.
Sarudza Referral Kuchengetedza Rondedzero uye tora paBDD Referral Kuchengeterwa.
Sarudza mazita aunoda kuisa kunze kwekutsvaga motokari.
Kukanganisa kweiyo nzira ndeyokuti kuwedzerwa kwemasimba muhuwandu hakusi kutsigirwa nehurongwa.